?Dhacdo layaab iyo fajac leh ayay nagu noqotey markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Britian oo shaley kusoo xirtey Laas qorey? Askar, wasiirka warfaafinta ee Puntland. – Radio Daljir
?Dhacdo layaab iyo fajac leh ayay nagu noqotey markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Britian oo shaley kusoo xirtey Laas qorey? Askar, wasiirka warfaafinta ee Puntland.
Garowe, July 10 – Wasiirka warfaafinta, is-gaarsiinta & hidaha iyo dhaqanka ee Puntland Axmed Cali Askar ayaa shir jiraa?id oo uu ku qabtey madaxtooyada Puntland ee Garowe waxaa uu ku sheegey in ay amakaag iyo layaab ku noqotey dawladda Puntland markab kuwa dagaalka ah oo laga yeelahay dalka Britian, isla markaana shaley galinkii hore kusoo xirtey dakada Laas qorey ee gobolka Sanaag.
Md. Askar ayaa hadalkiisa raaciyay in markabkaasi ay ka soo dageen ciidamo caddaan ah, kuwaasoo birriga ku yimid doonyo yar-yar ama saxiimado, waxaana dabadeed ciidankaasi rasaas ku furey ciidamo daraawiish ah oo ku sugnaa Laas qorey, sida uu wasiirku hadalka u dhigey.
Md. Askar ayaa qirey in ay dawladda Puntland u cadaatey in markabkaasi dagaal laga lahaa boqortooyada Britian, isla markaana uu dhawaan kusoo xirtey dakada Barbara, iyadoo dusha sare ee markabkaasina qado sharaf loogu sameeyay madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo.
Wasiirka ayaa sheegey in dawladda Puntland ay aad uga xuntahay xogta beenta ah ee la siiyay wasaarada arimaha dibada ee dalka Britian iyo ciidanka bada ee dalkaasi, waxaana uu hadalkiisa raaciyay in ay maamulka Somaliland sheegteen deegaano aysan gacanta ku heynin oo aan ka tirsaneyn dhulkooda.
Dhinaca kale wasiirka ayaa fariin digniin ah u diray maamulka Somaliland, waxaana uu sheegey tilaabadii shaley dhacdey oo kale in aysan mar dabne dhicin isagoo cuskadey in ay sababi karto hurin colaadeed iyo dagaal sababa dhimasho badan, waxaana uu hadalkiisa raaciyay Md. Askar oo beesha caalamka ugu baaqey in ay ogaadaan dhibaatada iyo colaada ay hurinayso Somaliland, isla markaana ay muhiim tahay in caqligu taliyo nabaddana laga wada shaqeeyo.
Ugu danbeyntii wasiirku waxaa uu fafriin carro leh u direy dawladda Britain oo uu sheegey ficilkii dhacay shaley in dawladda Puntland ay aad uga carootey, loona baahan yahay in la sameeyo kafiirsi badan.